Baadhis lagu ogaaday in ragga dhawrka xaas guursadaa ay ka cimri dheer yihiin ragga xaas kaliyaalaha | Somaliland Mirror
Home WARARKA Baadhis lagu ogaaday in ragga dhawrka xaas guursadaa ay ka cimri dheer yihiin ragga xaas kaliyaalaha
adminAug 11, 2020WARARKA0
Waxaa laga yaabaa in aanad dhawaaq ahaan soo dhoweyn waxa se daraasad dhowaan soo baxday tilmaantay in ragga haweenka badan guursadaa ka cimri dheer yihiin kuwa midka qudha guursada. Koox khuburo ah oo ka socdya jaamacadda Sheffield ee cariga ingiriiska oo daraasadan qaaday ayaa ogaaday in ragga nool meelaha ay dhaqankeeda ka mid tahay guurka badani ay ka cimri dheer yihiin kuwa kale. Iyada oo xisaabta lagu darsanayo xaalada dhaqan dhaqaale haddana ragga ay da’doodu lixdanka kor u dhaafto oo laga darsay 140 dal waxa lagu ogaaday in ay ka cimri
dheer yihiin kuwa kale ee aan guurka badan oo cimrigooda lagu sheegay 49 sano. Khuburadu waxa ay baadhitaan ku sameeyeen in cimri dhererka ragga sababsan karaan qodobo kale sida ehelkoodu higo u lahaayeen oo kale. Si ay tan u ogaadaan waxa ay tijaabo ka qaadeen 25000 oo dadka reer Finland ah qarniyadii 18 aad ilaa 19 aad. Dadku waxa ay u kordhayeen si gaabis ah, ma jirin wax uurka ka hortegi jiray oo la isticmaali jiray balse kaniisadaha qaarkood ayaa dadka ku khasbay in ay hal xaas qudha guursadaan. Nimanka carmalada ah oo qudha ayaa dib u guursan
kara, kolkaa haddii ay carruur u dhasho xaaska danbe waxa uu nasiib u yeelanayaa in uu carruur badan aabo u noqdo. Balse celcelis ragu waxa ay guursadaan hal xaas keliya. Balse ragaas markale dib u guursanaya ee xaaskoodii hore kala tagaan marna ma gaadhaan derejada awoow. Si aynu jawaab ugu helno su’aalaha maskaxdaada ka guuxaya khuburada cilmi baadhistan samaysay waxa ay isbarbar dhigeen cimriga ragga ka soo jeeda wadamada xaasaska badan la guursan karo
iyo kuwa ka soojeeda wadamada halka xaas laga ogol yahay iyaga oo adeegsanaya tirsiga haayada caafimaadka adduunka. Waxa kaalintaas hore galay oo cimrigoodu dheeraaday kuwa leh dhawrka xaas. Meesha lagama saarin wadamada qanig ah ee haddana halka xaas guursada. Gunaanadkii waxa lagu soo gunaanaday in ragga dhawrka xaas guursadaa ka cimri dheer yihiin kuwa halka xaas guursada.
Previous PostAKHRISO: (10) Tobanka GAADHI EE ADDUNKA LOOGU JECELYAHAY AMA UGU IIBKA BADAN. Next PostDeg Deg: Xisbiga Waddani Oo Si Adag Oo Dhaliilay Cabudhinta Saxaafada iyo Xadhiga Sharci-darrada Ah Ee Xukuumada Madaxwayne Biixi.